सेयर बजारका आपराधिक गिरोहको सांगठनिक चाल पत्ता लगाउनुहोस् ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
सेयर बजारका आपराधिक गिरोहको सांगठनिक चाल पत्ता लगाउनुहोस् !
हरिशरण न्यौपाने,काठमाडौ । पछिल्लो समय धेरै मानिसहरु सेयर बजारप्रति आकर्षित भईरहेका छन् । तर ती सबैलाई सेयर बजारमा अनियमितता र अपराध हुन्छन् भन्ने थाहा नभएर कतिपय फसिरहेका पनि छन् । कारण एउटा निश्चित समूह वा व्यक्तिले सेयर बजारबाट संधै फाईदा लिईरहने तर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु भने मर्कामा परिरहने पनि हुनसक्छ ।
त्यसैले तपाई सेयर कारोबारमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने बजारमा हुनसक्ने अनेक चालबाजीबाट बच्नुहोस् । तपाई आफैं नै सेयर बजारमा हुनसक्ने अनियमितता वा अपराधप्रति चनाखो बन्नुहोस् । संघै होशियार बन्नुहोस् । होईन भने तपाइको सम्पति सेयर बजारको कारोबारका कारण खत्तम हुन पनि सक्छ । सेयरको कारोबारले तपाईलाई उठ्नै नसक्ने गरि थला बसाउन पनि सक्छ ।
सेयर बजारमा यस्तै धेरै किसिमका अपराध हुने गर्दछन् । त्यस्तैमा एक अपराध सेयर बजारको सांगठनिक चाल पनि हो । सेयर बजारको कारोबारमा सक्रिय यसप्रकारको आपराधिक गिरोहले कुनै कम्पनीका बारेमा अनेक हल्ला फैलाएर सेयरको मूल्यलाई प्रभावित गराउँछ । यो चाल चाल्नेले या त सेयरको मूल्य घटाउने हिसाबले हल्ला चलाउन पनि सक्छ वा सेयरको मूल्य बढाउने हिसाबले हल्ला चलाउन पनि सक्छ ।
अब आयो किन यसो हुन्छ त ?
हो, यसो गर्नुको प्रमुख उदेश्य बजारमा लगानीकर्ताहरुलाई उक्त हल्ला चलाईएको कम्पनीको सेयर किन्न आकर्षित गर्नु वा बेच्न लगाउनु रहेको हुन्छ । मानिसमा अनेक हल्ला फैलाईदिएपछि डर, त्रास पैदा भएर थप सेयर किन्ने वा भएको सेयर बेच्ने दुवै कार्य हुनसक्छ । जे भएपनि हल्ला चलाउनेले राम्रै पुँजीगत लाभ लिन यसो गरिरहेको हुन्छ भन्ने चाँहि बुझ्नुपर्छ ।
त्यसपछि बजारमा अनेक हल्ला चलाईएपछि हल्लाका कारण बिक्री गर्नेको भिड भयो अर्थात् आपूर्ति बढि भयो भने माग कम हुन्छ र सेयरको मूल्य कम भएको मौका पारेर सेयर खरिद गर्ने र पछि बढि मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रमुख उदेश्य राखेको हुन्छ । हल्ला फिंजाएर मूल्य बढाउने कोशिस भयो भने हल्ला चलाउनेले आफुसँग भएको सेयरको मूल्य बढाएर बेच्ने कार्य पनि गर्नसक्छ । बुुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हल्ला फिंजाएर मूल्य बढाउँदा होस् या घटाउँदा आपराधिक गिरोहले यो चाल चालेर राम्रै पुँजीगत लाभ आर्जन गरिरहेको हुन्छ ।